कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी (भिडियो सहित)
काठमाडौं, पुष ०१ गते । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको महामन्त्री पदमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी हुनुभएको छ । बिहीवार अपरान्ह सकिएको मतगणनाअनुसार थापाले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दोस्रो सर्वाधिक मत विश्वप्रकाश शर्माले प्राप्त गर्नुभएको हो । मतगणनापछि नेपाली काँग्रेस निर्वाचन आयोगका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले गगनकुमार थापा ३ हजार २३ मत प्राप्त गरी विजयी बनेको बताउनुभयो । त्यस्तै विश्वप्रकाश शर्माले १ हजार ९ सय ८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महामन्त्रीका अन्य उम्मेदवारहरु डा. प्रकाशशरण महतले १ हजार ५ सय ५६ मत, प्रदीप पौडेलले १ हजार ३ सय ९३ मत, डा. मिनेन्द्र रिजालले ८०९ मत, र राजाराम कार्कीले १०६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । संयोजक घिमिरेले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको सिलसिलामा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिमा २०७८ मंसिर २७ गते भएको निर्वाचनको महामन्त्रीपदको मतगणना गर्दा गगनकुमार थापा ३ हजार २३ मत, डा. प्रकाशशरण महत १ हजार ५ सय ५६ मत, प्रदीप पौडेल १ हजार ३ सय ९३ मत, डा. मिनेन्द्र रिजाल ८०९ मत, राजाराम कार्की १०६ मत, विश्वप्रकाश शर्मा १ हजार ९ सय ८४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । जम्मा खसेको मत ४ हजार ६ सय ८२ मध्ये ४३ मत बदर भएको छ ।’